Apple inopa 50% kuderedzwa kune vashandi vanotenga iyo HomePod | IPhone nhau
Apple inopa 50% kuderedzwa kune vashandi vanotenga iyo HomePod
Vashandi veApple vanogona akateedzana ezvideredzwa kana uchitenga zvigadzirwa zvekambani yakavakirwa muCupertino, chimwe chinhu chinozivikanwa mumakambani ese. Anenge makore matatu apfuura, apo Apple yakaisa iyo Apple Watch pakutengesa, yakatanga chirongwa pakati pevashandi vayo kuti vagone kuitenga ne50% dhisikaundi.
Haisi nguva yekutanga kana kuzove yekupedzisira iyo Apple inopa inonakidza dhisikaundi pane chigadzirwa chitsva changosvika pamusika. Sekureva kwaBloomberg kwaMark Gurman, Apple iri kupa 50% kuderedzwa kuvashandi vekambani vanotenga HomePod.
Chikonzero cheApple chekupa ichi kudzikisira hachisi chimwe kunze kwekuyedza vashandi vako vanoziva nayo, kuitira kuti vazive kuishandisa zvizere uye nokudaro vagone kuitengesa vachiziva. Uku kudzikisira kunoshanda chete kwemwedzi miviri yekutanga kwekumisikidzwa kwayo, saka kana iwe uchinyatsofarira uye usiri kuda kupotsa mukana uyu, haufanire kutambisa nguva, kunyangwe ikatengeswa paBay mumashure pane zvishoma zvishoma pane yayo official mutengo., sezvo maererano nezvakataurwa iwe mazuva mashoma apfuura, kune yakawanda stock panguva ino.
Apple yakavhura iyo HomePod yekuchengetedza nguva muna Ndira 26. Kukadzi 9 izuva rakasarudzwa naApple kutanga kutumira iyo HomePod, kunyangwe yakatotanga kubhadharisa vatengi vekutanga vakasarudza iyi Apple speaker, yechipiri inogadzirwa nekambani, mushure meiyo modhi yaida iyo iPod. zvese huremu uye saizi yechikara, asi izvo zvakapfuura pasina kurwadziwa kana kubwinya kuburikidza nemusika. Pa iPhone Nhasi isu tatomirira yedu HomePod, saka kana iwe wakamirira kuongororwa kwekutanga muSpanish, iwe uchafanirwa kunge uchiziva nezveedu masocial network, nekuti kusvika pakati paFebruary isu tinofanirwa kunge tatove nawo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inopa 50% kuderedzwa kune vashandi vanotenga iyo HomePod
Saka saka pane akawanda mu wallapop, vanovatenga pa50% voatengesa pa75%, uye vanobuda vachikunda
Havaigone kuitengesa kusvikira gore, nekuti kana vaine dambudziko gore risati rasvika uye vakatengesa, vhudzi ravo rinodonha… shamwari yangu inoshanda ikoko!
Apple ichagadzirisa iPhone 7 ine kufukidza kutadza kwemahara